PHOTOS ။ Clara Morgan သူမ၏ခင်ပွန်းဂျယ်ရမီမှာ Oliver ပါသလဲ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "PHOTOS ။ Clara Morgan သူမ၏ခင်ပွန်းဂျယ်ရမီမှာ Oliver ပါသလဲ
ရက်အနည်းငယ်ခုနှစ်, Clara Morgan ၏ဒသမရာသီ၏သွန်း join ပါလိမ့်မယ် ကြယ်နှင့်အတူကခုန် အရာစဉ်အတွင်းကအလုပျသ Dereymez နဲ့ Duet ဖွဲ့စည်းသင့်ပါတယ်။ အိမ်ရှင်နှင့်စူပါ, အညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ယင်း၏ကျမ်းပိုဒ်ကနေတဆင့်အစောပိုင်း 2000 အတွက်ကျော်ကြားဖြစ်လာပြီး 2009 ကတည်းကအတူသူမ၏ဘဝကိုမျှဝေ ပိုကောင်းသည်သူ၏စင်မြင့်အမည်အား Jey အားဖြင့်လူသိများဂျယ်ရမီမှာ Oliver,.
Corsican အဘိဓါန်မူရင်း, ဂီတကိုနှစ်သက်အစောပိုင်း 2000 နှစ်ပေါင်းတစ်ထုတ်လုပ်သူနဲ့ DJ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတွေစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအကြောင်း, အထူးသဖြင့်, သူသည်အ ပထမဦးဆုံးအယ်လ်ဘမ်ထုတ်လုပ် L5တစ်ဦးစိန် disc ကိုချီးမြှင်။ သူ Timbaland နှင့်အတူနောက်ပိုင်းတွင်ပူးပေါင်းနှင့်အဆုံးစွန်သောသူ၏ဒုတိယအယ်လ်ဘမ်၏ခရီးစဉ်အပေါ်သူ့ကိုအတူလိုက်ပါဖို့ DJ သမားရှာနေချိန်တွင်သူ 2009 အတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး Clara Morgan ၏ဂီတနှင့်အနုပညာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစီမံခန့်ခွဲ။
အဲဒီနောကျကလညျး, မိတ္တူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကိုရောင်းထားတဲ့သူ့ရဲ့အဝတ်အချည်းစည်းပြက္ခဒိန်များအတွက်သောဓာတ်ပုံနှစ်စဉ်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ 2012, ဂျယ်ရမီ Olivier ဇနီးအတွက် Clara MorganCorsica ၌တည်၏။ လေးနှစ်အကြာမှာတော့ 2016 အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကိုဖြစ်လာ ကလေးကမိန်းကလေး၏မာနထောင်လွှားမိဘများ။ အဘယ်သူမျှမသံသယဂျယ်ရမီ Clara Morgan များအတွက်ကြယ်နှင့်အတူစွန့်စားမှုကခုန်ထားတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Clara Morgan နဲ့သူ့အဖော်ဂျယ်ရမီ Olivier ပဲရစ်အတွက် 24 စက်တင်ဘာလ 2013
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကိတ် Middleton? အမြိုးသားအရှေ့တော်၌ထို Duchess Piaud ၏ "ကိုယ်စားပေါ်" နောက်မှစိတ်ပြင်းထန်ခြင်းအတွက်တော်ဝင်ပရိတ်သတ်တွေ